Manana ny mampiavaka azy ihany koa ny vehivavy dongadonga, ary voalazan-dry zalahy aza fa izy ireny no tena mahay mampirevy. Nahoana àry ?
“Sexy” hoy ny siansa
Misarika lehilahy kokoa ny vehivavy dongadonga mihoatra raha araka ny fanadihadiana ara-tsiansa iray. Efa voajanahary ao anatin’izy ireo izany, hoy ihany ny siansa ka tsy misy fanafany, noho ireny vehivavy ireny tena “sexy”.
Mahavita zavatra kokoa raha matoky tena
Ny ankamaroan’ny vehivavy donga dia efa nahatsiaro ho menatra na nalahelo satria noresahan’ny olona noho ny habeny. Tombony ho azy indray aza izany satria rehefa nitraka sy ninia tsy naheno izany izy ireny dia lasa manja sy matoky tena ho azy. Any anaty firaisana ara-nofo no tena ahitana taratra an’izay fahatokisan-tenany izay … mampaniry kintana !
Nono sy fitombenana manaitaitra
Tena mahafatifaty sady manaitaitra ny filàn’ny lehilahy ny nono sy ny fitombenana rehefa lehibebe. Hafa kokoa mantsy, hoy izy ireo, ny mifampikasoka amin’ny vehivavy matevintevi-nofo, malemilemy mahafinaritra. Mampiakatra vetivety ny fahafinaretana izany.
Tsy dia tia mitsikera ny fahadisoan’ny lehilahy koa ny vehivavy donga satria efa nahatsapa izany atao hoe “voailikilika” izany, teo amin’ny fiainany. Efa nanaiky ny habeny ary niatrika sy nampihaingo azy amin’izany izy ka mandefitra amin’ireo tsy fanaperana kely misy na ataon’ireo lehilahy. Tena mampahazo aina be an’ireto farany anefa izany ka tsy mampihafihafy azy ireo rehefa mifampizara ilay fotoana mamy iny.